décembre 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
TENY FANOLORANA TRANOKALA
Ry havana malala ao amin’ny Tompo :
« Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » (Hebreo10 :24)
« Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara. » (Ohabolana 14 :22)
Feno haravoana sy hafaliana isika mihaona sy mitafa eto anatin’ny tranokalam-pifandraisan’ny F.J.K.M. Amparibe Famonjena. Ny tranokalam-piangonana toy izao dia entina hampitana zavatra maro momba ny Fiangonana sy ny kristiana miserasera ao anatiny.
Ny asan’ny Fiangonana dia misy dingana telo mifanao ambaratonga mba hahatanterahany ny baikon’ny Tompo hoe « … fahano àry ny ondrikeliko » (Jao.21:15). Ireto avy izany : fitoriana ny Filazantsara ho an’izay tsy mbola ao am-bala ; fitaizam-panahy rehefa tonga mikambana ho andiany iray amin’ireo efa ao am-bala ; ary fitaizam-pinoana mba ho kristiana sahy milaza hoe « … fantatro izay inoako » (2Tim.1:12d). Amin’io ambaratonga farany io dia tsy zaza amin’ny ara-panahy intsony, fa olona efa mahatratra ny ohatra ny finoana (Efe.4:13). Fomba mahomby entina mampita io baikon’i Jesoa io ny teknolojia toy izao, ka isaorana sy omem-boninahitra Andriamanitra.
Tenan’i Kristy ety ambany masoandro ny Fiangonana ka mila mijoro vavolombelona amin’ny sehatra rehetra. Ilaina ny mifampitaiza sy mifanabe indrindra rehefa manana fitaovan-tserasera tahaka izao. Ny tanjona kendrena amin’izany dia ny hahatonga ny olona rehetra hanolo-tena ho an’ny Tompo, ho tonga amin’ny fanavaozana ny saina, miezaka mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra, ka hikatsaka izay tsara sy marina ary ankasitrahan’ny Tompo (Rom.2:1,2).
Vokatra ara-panahy maro no azonao rantovina rehefa mitsidika ny tranokala; satria ianao dia tafiditra amin’ny dingana iray izay notanisaina teo ireo. Ankoatra ny fahafantaranao ny vaovaon’ny Fiangonana sy ny hafatra ary fanentanana isan-karazany, dia irinay koa ianao handray zava-tsoa maro sesehena. Enga anie ho mpiara-monina mifanasoa isika ka mandray sy miorina ary mizara ny zava-tsoa sy ny tsara azontsika tamin’ny fiantranoana tato amin’ny tranokalan’ny Fiangonana.
Miarahaba anao àry manokatra izao tranokala izao, sady misaotra koa anao mitsidika. Manantena izahay fa ho be zava-mahaliana anao ato, ka hahatonga anao hamangivangy matetika, fa tianay havana izany. Hahita ny tsara sy marina ary masina ankasitrahan’Andriamanitra ato ianao, sady hisy fiovam-piainana mendrika ny maha kristiana anao ny vokatry ny fitsidihana nataonao. Farany : « Mahereza ka mahefà ; ary Jehovah anie homba izay tsara » (2Tan.19:11).
Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena.
RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina
F.J.K.M. Amparibe Famonjena
S/P Antananarivo Andrafena (SPAA 10)
Publié le 28 décembre 2020 13 février 2021
Alahady 27 Desambra 2020
“MANAIKY AN’I JESOA MESIA NY MINO”
Alahady farany amin’ny taona 2020 Alahady Fiantsoana Alahady fitondrana am-bavaka ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona
« ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly. » Jeremia 1:10
Alahady natokan’ny Fiangonana eto Amparibe Famonjena hitondrana am-bavaka ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona ity alahady manaraka ny Krismasy ity ary alahady mamarana ny lohahevitra hoe “Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino”, izay nobanjinina nandritra ny volana desambra.
Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao. Ny Diakona RAJOHARISON Hanta Oliva no nitarika ny fotoana; litorjia endriny fahatelo no notanterahana.
Ny Loholona RABAKO Jean Jacques no nitari-bavaka mialoha ny namakiany ny Perikopa voalahatra tao amin’ny Testamenta Taloha ary ny Loholona RABAKO Hantavololona no nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Vaovao.
Ny Mpitandrina misotro ronono ROBEL Bruno Gabriel, zanaky ny eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ihany, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Niara-novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 99:1-5 ho fiderana an’Andriamanitra.
Taorian’izany dia noredonina ny hira FFPM 78:1-2 3 “Be ny voninahitrao Jesoa Kristy Tompo”.
Nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra, Izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, manome fiadanana, naniraka ny Zanany Lahy Tokana.
Misaotra noho ny fitantatany nandritra ny taona 2020 na dia nandia fotoan-tsarotra aza.
Misaotra tamin’ny Teny rehetra noraisaina nandritra ny taona.
Nisy feon-javamaneno fohy avy eo.
RABODOVOLOLONA Lydie, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 4 no nitondra ny hafatra. Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny tamin’izany dia ny Jaona 16: 33b“Atỳ amin’ izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.”
Tantaran’i Vao sy i Soa, mpiara-mianatra Sekoly Alahady, no nataony: i Vao dia mazoto mivavaka, fa i Soa kosa dia kamo. Noresahan’ i Vao tamin’i Soa izany hoe Fanjakan’ny lanitra ary nilaza i Vao fa ho eny an-tampon’ny lanitra ry zareo.
Tena te hahita izany Fanjakan’ny Lanitra izany i Soa satria mahatsiaro mijaly, leo ny eto an-tany. Ny vavaka “Rainay izay any an-danitra” no nataon’izy roa vavy ka rehefa tonga teo amin’ilay hoe “ety an-tany tahaka ny any an-danitra”, tonga dia nanezaka i Vao nanao hoe “Amena”.
Taitra be i Soa ka nanontany raha tonga ry zareo. Eny hoy i Vao. Tonga ahoana, hoy i Soa, nefa tsy nihetsika teo akory ange isika e. Dia hoy i Vao hoe “Ka efa hoe: ety an-tany tahaka ny any an-danitra”. Diso fanantenana sy nalahelo i Soa.
Hafatra: ety an-tany dia be fahoriana ka mila mivavaka, mangataka amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra; ankinina Aminy ny zavatra rehetra
Natao ny hira FFPM 761:1 “Ry Jesoa, Zoky be fitia!”
Natao avy hatrany ny hira FFPM: 68:3 “Be ny lazanao, ry Tompo” mialoha ny vakiteny.
Novakiana misesy ny perikopa voalahatra. Nivavaka mialoha ny vakiteny ary notohizan’ny tompon’anjara avy hatrany tamin’ny famakiana ny Jeremia 1:4-10. Nitohy ny famakiana ny Perikopa: Matio 4:12-17; Romana 11: 7-15.
Vita izany dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 67:4 “He, arahaba” mialoha ny toriteny.
Nivavaka ny Mpitandrina ROBEL Bruno mialoha ny nitoriany ny Tenin’Andriamanitra.
Niarahaba ny FDL sy ny Fiangonana amin’izao alahady faran’ny taona izao, nefa alahady Krismasy no filaza azy. Mbola misy fofompofona Krismasy.
Jeremia dia Boky vakiana rehefa misy fanokanana Mpiandry sy Mpitandrina ; fa hataontsika ho an’ny kristiana rehetra izany fiantsoana izany. Ny kristiana dia olona nahiliky ny fiarahamonina, voahenjika mandrakariva, tsy tiana na tsy hanehoana fitiavana, indraindray very tsy hita tsy antsoina fa manelingelina amin’ny korana… Izany dia tsapa eo amin’ny fiainan’i Jeremia. Ny herin’ny Tenin’Andriamanitra no manomana antsika sy manolotra ny lalana diavintsika.
Maniry ny vary dia miara-maniry eny ny ahi-dratsy sy ny tsiparifary. Nantsoina isika hanongotra izany ratsy izany. Raha mpanaraka an’i Kristy ianao dia misy hery sy fahasahiana hanesorana izany ratsy izany. Esorina hatramin’ny fakany mihitsy. Marary izany. Raha eo amin’ny fianakaviana no misy izany ratsy ongotana izany, dia tena marary. Io no andrasan’Andriamanitra amintsika tena kristiana, mba hahatanteraka ny famonjena.
Handrodana sy hanjera
Rindrina matevina ny faharatsiana. Ka ny kristiana no antsoina handrodana izany rindrina izany. Tsy foto-kevitra ihany fa foto-pisainana mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra no ilaina harodana.
Hanangana ny hoavy
« Mission messianique du christianisme » : Iraka ho amin’ny fanohizana ny asan’ny Mesia. Ho ahy sy ho anao izany. Nantsoin’Andriamanitra hanatanteraka izany ianao satria simban’ny faharatsiana (tsy fahamarinana, samy maka ho azy…) Antsoin’Andriamanitra hamorona firahalahiana vaovao tena hanjakan’ny fitiavana, fitiavana ny namana tahaka ny tena. Antsoin’Andriamanitra hanangana fomba fijery vaovao. Izaho sy ianao mihitsy no mandray andraikitra
Hamboly, rehefa vita ny fananganana
Hamboly fahamarinana, firaisan-kina, fitiavana (Fiangonana, fianakaviana, tanindrazana)
Ny zokiolona dia raiamandreny hajaina: hamboly ho an’ny ankohonana, fianakaviana, taranaka.
Tsy mendrika ny atao hoe zanak’Andriamanitra isika fa tsy nahatanteraka ny Teniny, koa mifona.
Olona tokony handrodana ny ratsy sy hanangana ary hamboly.
Ampianaro izahay Tompo hanana fahasahiana hijoro amin’ny maha kristiana.
Vita izany dia nohiraina ny hira: FF 33: 1-3 “Inty aho Jesoa”
Natolotra ny Teny famelan-keloka: “eny fa na dia mampahory aza Izy, dia mbola hiantra ihany araka ny haben’ny famindrampony” “Hataoko ahoana e no fahafoy anao, ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely” “Fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany”
Natao ny hira: FFPM 428: 1 “Reko izao ry Tompo” mialoha ny nanononana ny Fanekem-pinoana kristiana laharana faha 4.
Nisy feon-javamaneno fohy ary nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa
RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany.
Niarahaba manokana ny Diakona sy Loholona izy teo am-piandohana.
Hafatra avy amin’ny SEFALA
Alahadin’ny SEFALA sy ny fiantsoana anio
Fanohizana ny fanoratana boky lesona
Fanavaozana ny fitsipika fototra sy fitsipika anatiny
Faha 10 taonan’ny Tale nasionaly SEFALA
1 janoary 2021: Fanompoam-pivavahana tarihan’ny FFP eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Ho raisina hatao rakitsary ny talata 29 desambra maraina. Hanana anjara hira amin’io ny RFF sy ny Hasin’ny Famonjena
Poste d’évangélisation Manerinerina
29 desambra 2020 : Faha 10 taona maha Mpitandrina an-dRamatoa RAMINOARINOSY Ny Ilo Jihy
Ny Biraon’ny FDL no miandraikitra ny fanompoam-pivavahana manontolo androany.
Manohy ny famakiana sy fianarana ny boky nosorotan’ny apostoly Jaona. Mifarana amin’ity herinandro ity ny famakiana ny Epistily faha 3 nosoratan’i Jaona. Vita ny famakiana ny Filazantsaran’i Jaona manontolo sy ny Epistilin’i Jaona rehetra fa mitohy anefa ny fampianarana, fanazavana io Epistily io (sabotsy maraina).
Ny ankatoky ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia tanterahana eo anelanelan’ny fanompoam-pivavahana roa.
Hisy fanompoam-pivavahana ny 1 janoary amin’ny 8 ora maraina noho ny taom-baovao.
AFF: tany amin’ny FJKM Anjanamasina ny 26 desambra. 22 no mpiantafika; 68 ny tokantrano voavangy sy voatsidika.
Misy “écussons” 150 avy any amin’ny SPAAndrefana, Fanevan’ny faha 50 taona, hanaovana mandritra ny taona 2021.
Antso ho an’ny mpaka sary ho fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana sy ny Tranokala
Komity fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana: fandraisana Teny faneva hatramin’ny 3 janoary.
TATITRY NY ASA FDL taona 2019-2020
Ny Diakona RAZAFIMAHARO Hanitra no nanatanteraka izany
Rehefa vita ny tatitra dia nanao ny hira “Handeha ho irakao” ny FDL
RALAINDIMBY Haja, Biraom-piangonana no namaky ireo voady sy raki-pisaorana nataon’ny mpianakavin’ny finoana
Tsingerintaona fanambadiana, fisondrotana teo amin’ny asa, fahazoana taranaka …
Nahatratra 30 093 300 Ar ny vokadehibe voaray hatreto.
Natao ny FF 7:1 “Tsy hainay ny hangina”
Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 45: 4 “Ry Tomponay mandraisa”, ny rakitra ho fanavaozana ny fanolorantena.
Ny voalohany dia ny fizarana valisoa ho an’ireo mendrika tamin’ny fahalalana Soratra Masina
« Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao;… » (Salamo 119:34a) Izany no Teny nentin’ny VAP
Namarana izany ny Mpitandrina, nitondra am-bavaka, nisaotra sy nidera ary nangata-pitahiana.
Ny faharoa dia ny famakiana ny anaran’ireo nodimandry nandritra ny taona 2020
Ny Mpitandriana RAHARIJAONA Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana.
Mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny FDL, raiamandreny mpitari-dalana. Apetraka eo am-pelatanan’Andriamanitra ireo katekomena sy ireo vao hiditra mba hahavita hatramin’ny farany. Mivavaka ho an’ireo hiditra ao amin’ny SEFALA na ireo efa mianatra, tsy hisy ho latsaka fa hahavita ny fianarana avokoa.
Misaotra noho ny vokadehibe fa na sarotra aza dia nahatratra ny tanjona izay nosoritana ny Fiangonana. Ireo sahirana, marary, mana-manjo, very asa, tratran’ ny kere: Ianao hijery sy hitsimbina azy ireo ry Tompo.
Eo am-pelatananao ireo izay manana hataka manokana. Ianao hamaly vavaka. Ireo nanao raki-pisaorana sy nanao voady masina, homba azy ireo hatrany Ianao, hankinina aminao Izy ireo.
Fantatrao ny hetahetanay ka Ianao hamaly vavaka. Akambanay izany amin’ny vavaka nampianarinao.
Nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 615: 1 “Ry Jehovah, Ray mahery”, novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 64:1-3 “Injany hiran-danitra” nofaranana tamin’ny Amena hiraina, nisy vavaka mangina ary ny “Trinité”.
∙ Nikirakira ny fafana : RATIARISON Joris
∙ Nikirakira ny fanamafisam-peo: HARENTSOA Rova
∙ Naka ny sary: RABEMANANORO Jonathan
∙ Nitendry orga: RABIAZAMAHOLY Herilanto
∙ Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy
Publié le 27 décembre 2020 13 février 2021
Zoma faha-25 Desambra 2020
Zoma 25 desambra 2020. Andro Krismasy hankalazana indray ny nahaterahan’ny Mpamonjy. Andro voatokana ihany koa ho fanateram-bokatry ny Fiangonana Amparibe famonjena. Andro lehibe ny fotoana anio noho izany, satria dia fotoana lehibe roa sosona no notanterahina.
Litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana ary ny Mpitandrina miana-draharaha, RAMILISON Diamondra, no nitarika sy nitondra ny hafatra. Ramatoa RAHARIJAONA Bodo no nanao ny vavaka sy namaky ny Soratra masina. Mbola mandinika ny lohahevitra « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino » isika.
FANOMBOHANA NY FOTOANA
Ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno no niandraikitra ny fotoana iray manontolo. Taorian’ny feon-java-maneno, dia niantso sy nidera an’Andriamanitra ny mpitarika, ary natao ny hira FFPM 67 : 1, 2, 3, izay narahiny vavaka avy eo.
FAMAKIANA NY SORATRA MASINA
Nasiana feon-java-maneno fohy ary natao ny hira FFPM 71 : 2, 3 ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Isaia 11 :1-10, Matio 2 : 6-12 ; Galatiana 4 : 1-7 ka ramatoa RAHARIJAONA Bodo no namaky izany.
Natao ny hira FFPM 65 : 1, 2 mialoha ny hafatra.
Fety lehibe ny Krismasy ary matetika dia toa adino ny maha Krismasy azy, fa toa lasa fahazarana fotsiny ihany. Toa zavatry ny tany no ankalazaina, hoy ny Mpitandrina.
Ny Filazantsara araka ny Matio manambara ny « Krismasin’ny Magy » no nitondrany ny hafatra. Misy toe-tsaina sy hafatra azo raisina ao, hoy izy.
Misy toe-po telo samihafa voalaza eto. Samy toe-tsaina avy amin’ny olona ireo.
Misy mahalala hoe Krismasy nefa tsy miraharaha.
Ny mpisorona sy ny mpanora-dalana
Nahafantatra izy ireo nefa tsy miraharaha. Nahalala izy ireo fa Kristy no teraka ary hitondra famonjena ho azy, nefa tsy niraharaha izy ireo. Izay ilay voalaza ao amin’ny Jaona 1 : 11 « Tonga tany amin’ny azy ihany Izy, fa ny azy tsy nandray Azy ».
Misy indray ireo olona izay mamono ny drafi-pamonjen’Andriamanitra. Heroda no tiana ambara eto. Heroda moa dia olona tia voninahitra ka rehefa nilaza taminy ny magy, fa misy mpanjaka teraka fa tsy avy aminy izany, dia nitsangana avy hatrany izy, ho fahavalon’izany mpanjaka vao teraka izany.
Ireo indray nifaly fa tonga ny Mpamonjy, nahita fahasoavana tsy manam-paharoa. Ireo magy dia mpanjaka ary mampifandray ny zava-misy eny an-danitra sy ny ety an-tany. Niavaka ny fihetsik’izy ireo, satria fantany fa mpanjaka no teraka.
Taomina isika mba handray ny vaovao mahafaly toy ny magy. Eo amin’ny andininy faha 11 : « Ary rehefa tafiditra tao an-trano … ». Mila manaiky marina ho Mesia an’i Jesoa isika. Esory ny momba anao ka maneke an’i Jesoa. Niala tamin’ny toerana maha mpanjaka azy ireo magy, ka niondrika teo amin’i Jesoa. Mila manao toy izany isika. Mila mahafoy ny fananana, ny momba antsika rehetra, ny fanjakan’ny tany, izay vao afaka manatona an’i Jesoa. Sakano izay mahavery anao.
Fiadanana no tadiavintsika eto amin’izao fiainana izao. Raha mikatsaka izany isika dia mila miankohoka amin’i Jesoa ary mila manolotra Azy izay aty amintsika. Izay no fihaonana tsara indrindra tadiavin’ny Tompo, avy ao anatintsika.
Ekeo marina ho Mesia i Jesoa, ary asio heviny sy tanjona ny lalanao. Toy ireto magy izay nandeha toerana lavitra dia lavitra, mba hanatratra ny tanjona izay napetrany dia ny hiankohoka eo anatrehan’ny mpanjaka izay hitany.
Mila mametraka tanjona isika eo amin’ny fiainana. Kintana no nisy, narahin’ireo magy fa ny antsika koa dia Jesoa Kristy mihitsy no lalana sy tanjona mipetraka. Ekeo ny fitarihan’Andriamanitra ny fiainanao.
Ankehitriny dia ny dadabe noely sy ny fety ivelany no havoitra mba hanakonana izany tena andro Krismasy izany.
Mila manaiky Azy ho Mesia isika ary aoka hazoto hanolotra ho Azy izay tokony ho Azy.
Ny fiankohofana dia finoana sy fanekena Azy ho Mpanjaka. Nitondra zava-manitra ireo, nitondra miora. Ny miora dia fanosotra ny fatin’ireo Andriamanjaka. Eto dia mampiseho sahady fa ho faty Jesoa izay teraka. Isika ihany koa dia taomina hazoto hanolotra izay tsara indrindra ho an’ny Tompo. Mety fanoloran-tena izany, mety fananana izany. Izy Tompo mahita ny momba antsika tsirairay avy.
Ny tena zava-dehibe andrasany amintsika dia ny haterahantsika indray, mba ho ao amin’ny Tompo. Tsy mitovy amin’ny krismasin’izao tontolo izao ny antsika, samy mifaly isika fa isika kosa manana tanjona dia ny mba ho teraka ho vaovao indray.
Taorian’ny hafatra dia nandray anjara hira ny STK. Nanao ny vavaka noho ny Tenin’Andriamanitra ny mpitarika ary niaraha-nanonona ny vavaka fanekem-pinoana ho fanamafisana indray ny fanoloran-tena.
Taorian’ny feon-java-maneno dia nanao ny fifampiarahabana notarihan’ny mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina. Nalaina avy ao amin’ny Isaia 11 : 2a : « Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra; dia ny fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin’ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin’ny fahalalana sy ny fahatahorana an’i Jehovah. »
Rehefa izany dia niroso tamin’ny rakitra, ny famakiana ireo nanatanteraka voady sy raki-pisaorana ary ihany koa ireo nanao vokadehibe. Amin’ny maha vokadehibe moa, dia rakitra manodidina no notanterahina. Nifandimby nanatanteraka ny hira ny RFF sy ny STK ary ny SMZM nandritra izany.
Natao ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra ny hira FFPM 75 :3.
Taorian’ny feon-java-maneno dia niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny fitahian’Andrimanitra ny Mpitandrina.
Notohizana avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Rehefa vita izany dia nanome hafatra fohy ny Mpitandrina : « Eny, Tompoko, mino aho fa Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra, Ilay ho tonga amin’izao tontolo izao.” Jaona 11:27
Natao ny hira FFPM 81: 1 – 4 mialoha ny famakiana ny tondrozotra sy nanomezana ny tsodrano ary ny hira FFPM 67 : 4 no namaranana ny fotoana.
Mpitendry: Ny Sampana Mpiangaly zava-maneno
Naka sary : Ramahery Hasina
Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra
Publié le 21 décembre 2020 27 décembre 2020
Alahady 20 Desambra 2020
Alahady 13 desambra 2020
Alahady faha-13 Desambra 2020
IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY
« Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »
« Koa mahereza ianareo, fa aza miraviravy tanana ; fa hisy valim-pitia tokoa ny hataonareo » II TAN 15 : 7
Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.
Alahadin’ny ny sampana Sekoly Alahady « Antoky ny famonjena » androany. RAZAFINDRAMAMBA Andry no nitarika ny litorjia. RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 8. Noredonina ny hira FFPM 780 : 1-2 “ HE DERA LAZA HERY “ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina. Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.
RABEARINORO Jocelyn, mpampianatra ao amin’ny K7 no nitarika izany.
Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ao amin’ny JAO1 : 41b hoe :
« efa nahita ny Mesia izahay »
– Iza no atao hoe Mesia ? misy fononteny ao amin’ny Baiboly hoe Kristy
– Efa nahita ny Mesia ve ianao ? tsy iza izany ny Tenin’Andriamanitra satria Jesoa Kristy ilay Teny tonga nofo. Raha mianatra Sekoly Alahady isika dia mahita ilay Mesia
– Inona no hataonao rehefa nahita ny Mesia ? manaraka Azy isika, mankato ny Teny izay voalazan’i Jesoa Kristy (ohatra : « Tiava ny namanao tahaka ny tenanao »). Ny hira FFPM 73 :2 « Indro zazakely zanak’i Maria » no nataon’ny fianakaviamben’ny Sampana Sekoly Alahady teo am-pitsanganana dia nisy vavaka. Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM 71 : 1-4 « MIHAINOA, MIHAINOA ». Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ ANDRIAMAHERY Hanitra, mpampianatra ao amin’ny K2 sy namaky ny EZE 3 : 1-3. Ny MAT 11 : 25-30 sy II TIM 3 : 14-17 kosa dia RAKOTOZAFY Onimalala, mpampianatra ao amin’ny K2 no namaky izany. Natao ny hira FFPM 68 :1 « RE TOKOA NY FEON’ANJELY » mialoha ny toriteny.
Araka ny fangatahan’ny Sekoly Alahady manokana noho ny ivon’ny herinandrom-bokany dia naompana ny toriteny tamin’ny tondozotra 2020-2021 sy ny vina mandritra ny taom-piasana 2019-2023 hita ao amin’ny II TAN 15 :7 sy SAL144 : 12.
1. Ny tokony ho fiainan’ny Sekoly Alahady miaraka amin’ny vahoakan’Andriamanitra
Ny tarigetra sy fanambin’ny sampana ho fitaomana ny olona hianatra Sekoly Alahady dia famoahana olona maha-te ho tia. Rehefa revo tanteraka tao anaty fanompoan-tsampy ny fanjakan’i Joda izay dia niezaka namerina azy mba hanana Andriamanitra hivavahana ny mpanjaka nony nahazo teny faminaniana. Taomina isika mba hatohatoky an’Andriamanitra izay ivavahantsika. Sarotra ny nitaona sy namerina ny ankizy hianatra Sekoly Alahady. 480 no ankizy nizarana loka aninkeo tamin’ny fotoam-bavaka tamin’ny 7 ora. Ny olona tsy miraviravy tanana dia :
mino ny herin’ny Tsitoha izaymahavita ny zavatra rehetra tsy takatry ny rehetra ;
manantena ny fitantanany izay azo antenaina ho tonga ho amin’ny fahombiazana sy fahasoavana mandrakariva, nivoaka tamin’ny fitahiana mahatetrika
manaiky ny sitrapony : Izy no mitondra antsika ho amin’ny zavatra mampandroso hahatonga antsika tsy ho voan’ny zava-dratsy, afaka ny hakiviana sy famoizampo. Manao ahoana ny ray aman-dreny, mpampianatra, mpianatra, zanaky ny Fiangonana rehefa hiverina hanao ny asa fanompoana ?
2. Nody ventiny ny rano nantsakaina
Nahazo faherezana ny firenen’i Joda rehefa niverina tamin’ Andriamanitra ary ravoravo sy tretrika ny mpanjaka. Misy valimpitia azontsika ho amin’ny izay natao rehetra : fitahiana, fifaliana, fahombiazana. Tsy miraviravy tanana na amin’ny mora na amin’ny sarotra ka :
– tonga nisy ny fahazotoana, afaka ny nanelingelina
– tonga ny fahavononana
– tonga vanona mahate-ho tia.
Tsy ho an’ny mpianatra ihany izany fa ny mpampianatra ihany koa. Izay no anentanana ny Fiangonana hanohana sy hitondra amim-bavaka sy hampahery azy ireo. Hanaiky an’i Jesoa anie isika hitory finoana sy fanantenana ary fitiavana !
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.
Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana nikeanina (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.
TATITRY NY SAMPANA
Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain-dRABENASOLO Landy, mpitantsoratra. RAZAFINDRASATA Abel, Filoha no namaky ny hafatra avy any amin’ny Sekoly Alahady Foibe FJKM. Ny raharaham-piangonana no nambara taorian’izay.
RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny II TIM 3 : 15 nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :
Hanomboka hianatra anio tolakandro amin’ny 2 ora sy fahefany ny katekomena andiany vaovao
Efa miverina ny fotoam-bavaka zomà amin’ny 6 ora sy fahefany hariva
Herinandron’ny fikambanan’ny mpitory Filazantsara manomboka ny 14 desambra 2020
Antsan-kiran’ny Taninketsa ny zomà 18 desambra 2020 amin’ny 6 ora hariva
Fivorian’ny mpihevi-draharaha ny sabotsy 19 desambra 2020 amin’ny 8 ora maraina
Vaomieran’ny tranokala hivory ny alahady 20 desambra 2020 amin’ny 8 ora sy sasany maraina ao amin’ny efitry ny Gazety
Fizarana valisoa karakarain’ny STK Zo, androany no fara-fisoratana anarana
Izay zokiolona feno 70 taona harahabaina amin’ny taombaovao dia entanina hisoratra anarana ao amin’ny Biraom-Piangonana
Nandray fitenenana ny Filohan’ny Firaisan’ny sampana RATIARISON Joris nanentana momba ny fotoana amin’ny 24 desambra 2020 amin’ny 5 ora sy sasany hariva, hetsika nampitondraina ny lohateny hoe : « Noely hafa kely ; ambarao ny fahalehibiazany ». Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.
RAKITRA & FANOMEZANA
Nandritra ny fanatazana ny fanatitra nanaovan’ny Fiangonana ny hira FFPM 67 “AVIA, RY MINO “ dia novakian-dRAZAFINDRABE John Bam ny voka-dehibe taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 8 : 3-4. Ar 8 900 000 no fitambaran’ny vola voaray androany. Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 512 : 5 « HE MAHATOKY AHO TOMPO » ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa sy fampaherezana ny fotoana.
RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Voatonona ny asan’ny sampana, sampanasa, asa, indrindra ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady Antoky ny Famonjena noho ny herinandro natokana ho azy amin’ity taona ity ; ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny fitandremana ao anatin’ny fanatanterahana voka-dehibe ; ny olona manana fahasahiranana, tsy salama, manana hataka manokana. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 489 : 1 « TENA SAMBATRA SY MAHATE-HO TIA ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 480 : 2 « MAMIN’NY FOKO, RY JESOA ». nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité. Nirava ny Fiangonana tamin’ny 11 ora sy 37 minitra tao anaty feon-javamaneno.
Mpitendry : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto
Niandraikitra ny fafana : RAJAOFETRA Arielle
Nikirakira ny fanamafisam-peo : RAMAHERY Yves
Publié le 7 décembre 2020 11 décembre 2020
Alahady 06 Desambra 2020
Alahady faha-06 Desambra 2020
Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »
Mihobia ho an’i Jehovah amin’ny fifaliana, …. Fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy ». Alahady 6 Desambra 2020. Alahady faharoa manaraka ny advento ary alahady voalohany hibanjinantsika ny lohahevitra hoe « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino ». Andro lehibe eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana satria dia ivon’ny jobily fankalazana ny faha 50 taona ny sampana Hasin’ny famonjena. Sampana velona eto anivon’ny Fiangonana niorina ny 17 May 1970. Ny filohan’ny sampana Atoa Robel Hanitra, no nitarika ny fotoana, ny filohan’ny komity 50 taona, Atoa Rabemila Mamy no nanao ny vakiteny ary ny mpanolotsaina eo anivon’ny komity 50 taona, Atoa Razafy Ianja kosa no nanao ny vavaka. Nanao ny tantara ho an’ny ankizy sy ny tatitry ny sampana dia ireo mpitantsoratry ny sampana, Rtoa Rahajarizafy Bakoly sy Rtoa Rambeloson Mitsoa. Litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana.
Tena nampihetsipo ny fotoana anio satria dia niara-niombombavaka tao avokoa ireo mpikambana Hasin’ny Famonjena tranainy izay tena maro dia maro tokoa.
Vao vita ny feonkira fidirana dia nanao ny hira « Mihobia ho an’i Jehovah » (Ranaivo Ranairovelo) ireo mpikambana ankehitriny miaraka amin’ireo tranainy ireo.
Novaikiana ny Salamo 100 ;111 ;9-10 ho fiderana an’Andriamanitra.
Rehefa izany dia natao ny hiran’ny finoana 33 « O Ingao ny hirampifaliana » (Ramilison Paul). Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana.
Ny feonjava-maneno avy hatrany taorian’izany.
FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA
Nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy ny tompon’andraikitra. Ny teny tao amin’ny Oha 17 :17a « Izay tia tokoa dia tia amin’ny andro rehetra » no teny nozaraina. Nitondra tantara kely izy tamin’izany. Natao ny hira Ffpm 790 : 1 ary nofaranany tamin’ny vavaka.
Natao ny hira FFPM 244 : 1, 2, 4 mialoha ny vavaka sy vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Genesisy 49 : 8-10, Matio 1 : 1-17, I Korintiana 12 : 1-3.
Natao ny hira « Handeha ho irakao » (Rabako Ralambonirina Jean Jacques) mialoha ny toriteny.
Ny teny faneva « Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ….fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » Salamo 100 :2a ; Sal 111 :10b.
Ity teny faneva ity no novelabelarin’ny mpitandrina tamin’ny hafatra izany nentiny.
Salamo faha100 dia fiderana ankapobeny. Nanao fanatitra ho fiderana ireo noho ny fanambinan’Andriamanitra.
Ny salamo faha111 kosa dia Salamo Haleloia lehibe. Amin’ny fotoandehibe dia tsy maintsy vakiana ity Salamo faha 111 ity.
Salamo manabara ny haja sy voninahitra ihany koa ity faha 111 ity. Nozarain’ny mpitandrina roa ny hafatra : mitory amin’ny fifaliana
1. Mitory amin’ny fifaliana
Ny olona mitory amin’ny fifaliana dia olona efa nanaiky an’i Jesoa ho tompon’ny fiainany ka manaiky mba hizara izany. Raha eritreretina izany dia afaka sintomina ireto manaraka ireto :
a. Olona manolo-tena hanompo no mitory amin’ny fifaliana. Mahatsapa ny fitiavan’Andriamantira ireo olona ireo ka dia manolo-tena izy.
b. Manda-tena mihitsy hampandroso ny fanjakan’Andriamanitra. Eo no anehoana ny fankasitrahana an’Andriamanitra.
Tsy mora ny mitory amin’ny fifaliana fa mila fandava-tena sy fanolora-tena mba hanaovana ny asa masina.
Ny toriteny an-kira no atao. Ny hira izay atao dia sady ahavoa ny fo ary koa ny saina. Ny feon’ny hira dia mandona ny fo ary ny tonony dia mamelombelona ny saina.
Vao misy mamoron-kira dia efa fitoriana sahady izay.
Fanambaram-pinoana ampahibemaso koa izay manao asa fitoriana izany. Fijoroana vavolombelona izany asa atao izany. Rehefa miaino manko ny olona dia jereny avokoa ny zavatra rehetra.
Fijoroana vavolombelona ankira koa izany fanaovana toriteny an-kira io.
Rehefa nandinika ny tantaran’ny Fiangonan ny mpitandrina tao anatin’ny 50 taona lasa ao amin’ny mpikambana, dia nilaza fa 1/8 dia diakona avokoa, ¼ dia biraon’ny Fiangonana. Tiana ambara dia isan’ny fikambanana mitaiza olona handray andraikitra izany sampana izany.
2. Maharitra amin’ny fanompoana
Izay matoky ny famonjeNy no afaka aharitra amin’izany fanompoana izany. Ny olona izay maharitra dia manana antoka ny amin’ny famonjen’i Kristy.
Ny olona maharitra dia mahasedra ny zavatra rehetra ka omen’ny Tompo fahaiza-manao enti-manompo. Izay mino dia mandray hery.
Ny olona maharitra dia vonona hiatrika izay zavatra mitranga. NY olona mandroso amin’izany dia izay mahatahotra an’Andriamanitra ka vonona hankato Azy. Raha izany no tanjona ao anatin’ny antoko mpihira dia tanteraka izany.
Hanadinana anao io fiharetanao io ka fotoanany izao raha toa ka hiovanao. Tokony atao fiainana izany asa fanompoana izany mba ahafahana manatanteraka ireo voalaza ireo.
Raha manaiky an’i Jesoa isika dia nino ny hafatra sy ny tenin’Andriamanitra isika. Tanteraho amin’ny zoto ny asa mba hisian’ny fifaliana mba ho tanteraka ny fifaliana ara ny nolazain’i Paoly.
Nanao ny vavaka setrin’ny ny tenin’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izay. Ary ho fanavaozana ny fanolorantena dia niaraka nanonona ny fanekempinoana laharana voalohany ny mpianakavin’ny finoana.
Tokony manao ny asa sy adidy rehetra isika, atao amin’ny fifaliana ary mba aharitra mandrakizay.
Nisy ny feonjavamaneno taorian’izay.
Niroso tamin’ny tatitry ny sampana ny tompon’andraikitra. Asa nanomboka ny tapaky ny taona 2019 hatramin’izao fotoana izao no nolazaina. Niendrika tononkalo mo no nitondrana izany tatitra izany ka anisan’ny voalaza ny fanokafana ny faha 50 taona ny desambra 2019, ny fiarahabana tratry ny taona ary antsampanahy PAska izay nalefa tamin’ny pejy facebook ny Hasin’ny Famonjena sy ny Fiangonana.
Nanao ny hira « Rojompiderana » (Robel Hanitra) ny mpikambana Hasin’ny famonjena taorian’izany.
Niroso avy hatrany tamin’ny raharahan’ny Fiangonana ka Atoa Razafimaharo Mamy no nitondra izany. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :
• Voka-dehibe ny eto amin’ny fitandremantsika amin’ity volana ity ary ny 25 Desambra no ivony
• Fotoana ho an’ny Sekoly Alahady ny amin’ny herinandro 07/12 hatramin’ny 13 Desambra 2020.
• Fizarana loka ho an’ireo afaka fanadinana ny Alahady 20 Desambra
• Ny Alahady 27 Desambra no alahdy ho an’ny FDL
Nanampy fanentanana moa ny mpitandrina momba ilay voka-dehibe ny Fiangonana amin’ity taona 20020 ity.
Niroso tamin’ny famakiana ireo voady ary koa fanaovana ny rakitra. Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm 545 : 1 ho fanolorana ny rakitra.
Nitsinjara ho maromaro ny asa vavolombelona tamin’ity fotoana jobily volamena ny Hasin’ny famonjena ity.
Nanomboka tamin’ny fijoroana ho vavolombelona izany. Atoa Rambeloson Jeannot no nanomboka izany. Izy moa dia anisan’ireo mpikambana mbola velona, ary mbola manatevina ny mpikambana ankehitriny, nandrafitra ny Hasin’ny famonjena tamin’ny nitsanganany tamin’ny taona 1970. Nilaza tantara ny amin’ny noforonan’ny sampana izy.
Atoa Andrianilaina Andrianasolo no nandray ny fitenenana nanaraka azy. Izy dia nanonona ireo olona izay nomena mari-pahatsiarovana tamin’ity jobily ity. Tao anatin’izany dia nomena « certificat » fahatsiarovana ireo :
• nandrafitra ny sampana voalohany ka mbola velona, niisa 27 izy ireo.
• Tsangambato ara-panahy napetraky ny sampana : dia ny sampana taniketsa, ny mpitandrina Ramilison Diamondra, ny mpitandrina Raharilavitra Roland, ny mpitandrina Sam Chuen Jacques Bruno
• Ny filoha nifandimby izay niisa 8
• Ireo rehetra namoronkira miisa 17
Nomena valisoa koa ireo izay nandray anjara tamin’ny fifaninana hira faneva sy ny saripamantarana 50 taona. Tamin’ny hira faneva, ny nahazo ny voalohany dia Atoa Irimanana Emilson Enikaja, ny faharoa dia Aoa RAzafindrabe John Bam sy Rafaralahidimy Liva ary ny fahatelo kosa dia Rajaofetra John. Teo amin’ny sary famantarana kosa nahazo laharana voalohany mitovy Atoa Andriamizakason Toky Axel sy Rasolofosoandraibe Miora Pamela. Natambatra ho iray moa ny sary famantarana nataon’izy ireo.
Taorian’ny fanolorana certificat dia niroso tamin’ny fitokanana ny takela-bato fahatsiarovana ny jobily faha 50 taona ary nanaraka izany dia natolotra ihany koa ny tsangambato « piano ».
Notendrena voalohany izany « piano » izany rehefa avy natolotra ary rehefa izany dia nanao ny hira faneva faha 50 taona ny sampana.
Nanao ny teny fisaorana ny filohan’ny komity ary nisaotra sy nanolotra fahatsiarovana ho an’ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina ihany koa.
Nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izay ary niomana amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
Tao anaty fotoampivavahana moa ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
Rehefa avy nanome ny hafatra ny mpitandrina dia natao ny hiran’ny finoana « Haleloia, mihira fihirambaovao » (Rabary). Novakiana ny tondrozotra, nomena ny tsodrano, ary natao ny hira Ffpm 79 namaranana ny fotoana.
Nizara mofomamy ho an’ireo mpivavaka rehetra tao moa ny Hasin’ny Famonjena.
Mpanao fafana: Solofo RAKOTOSEHENO
Mpikirakira fanamafisam-peo: Yves RAMAHERY
Naka ny Sary: Hasina RAMAHERY / Joël RANAIVOSON
Mpandray an-tsoratra: Hanitra ROBEL